Suuq-geynta Cimilada iyo Sababta Faa'iidadu ugu xirnaan karto | Martech Zone
Arbacada, Agoosto 5, 2015 Arbacada, Agoosto 5, 2015 Douglas Karr
Iyada oo leh dhammaan boggaga iyo aaladaha aan ka heli karno shabakadda, maxaan dhammaanteen si fudud ugu heli lahayn qiimaha ugu hooseeya ee badeecad kasta? Waxaa jira macaamiil badan ama ganacsiyo taas sameeya, laakiin dadka badankood ma sameeyaan. Waxaan ku wadaagay khadka tooska ah dhowr sano ka hor oo aan ka beddelay wadista baabuurta loo yaqaan 'Fords' illaa 'Cadillac'. Dukaanleyda 'Ford' ayaa iga careysiisay markii ay igu soo dallaceen lacag yar si aan u xalliyo arrinta soo celinta.
Waan bixiyay khidmadda, ka dib waxaan u kaxeeyay dhanka Cadillac badan toddobaadyo ka dib. Waxaan dhaawacay inaan ka baxo SRX cusub habeenkaas. Qofka wax iibiya ayaa ka soo booday hoops si uu ii helo gaadhigii aan ku doonayey qiime aan awoodi karo. Markii aan ku soo laabtay si aan ugu daro dabaqyada dhiiqada iyo baaskiil, waxay ku rakibeen lacag la'aan. Markay tahay dhalashadayda, waxay iigu yeeraan oo ii rajeeyaan Dhalasho Wacan. Markii aan u imaado isbeddelka saliidda, waxay i siinayaan xafiis Wi-fi ah, ama dusha sare ee gaariga amaahda safka oo aan lacag ku fadhiyin. (Haa, waan ogahay inay rabaan inaan iibsado).
Runtu waa, waan jeclahay SRX… laakiin waan jeclahay astaanta. Khibrada uu wakiilka iibiyuhu bixiyo, ganacsaduhu wuxuu bixiyaa, iyo calaamaduhu waxay bixiyaan, waxay abuureysaa khibrad dhaafsiisan 4-ta albaab ee gaariga. Waxaan dareemayaa mid gaar ah… waxaana diyaar u ahay inaan ku bixiyo lacag dheeri ah midaas.
Adduunyada naqshadaha, waxay ugu yeeraan waaya-aragnimada booska kugu hareeraysan Hawada, oo lagu qoray iyadoo diirada lasaarayo naqshadayaasha iyo khibradaha tafaariiqeed ee ay qorshaynayeen.
In 1973, Philip Kotler ayaa maqaal ku qoray Joornaalka Tafaariiqda halkaas oo uu ku sharaxay saameynta booska tafaariiqda ay ku leedahay dhaqanka iibsiga. Wuxuu siiyay qeexitaankan soo socda:
Dadaalka loogu talagalay in lagu qorsheeyo bey'adaha wax iibsiga si loo soo saaro saameyn shucuur gaar ah oo ku saabsan iibsadaha oo xoojiya suurtagalnimada wax iibsiga. Saamaynta itimaalka waa tayada dareenka ee booska ku xeeran shayga iibka, aragtida iibsadaha ee astaamahaas dareenka, saamaynta tayada dareemayaasha dareemayaasha ah iyo saamaynta xaaladda saamaynta iibsadaha.
Kadib 20 sano oo aan ka shaqeynayay kombuyuutarrada, shirkadda aan u shaqeeyay waxay ii soo iibsatay MacBook Pro. Sanduuqa ayaa qurux badnaa. Waxay lahayd gacan qabasho, waxaa loogu talagalay inay la siman tahay xayeysiintooda, markii aad furtayna, laptop-ka waxaa lagu xirayay xumbo madow oo jilicsan. Waxay ahayd khibrad ka soo jiiday sanduuqa oo miiska saartay. Ma ahayn dhibaatada caadiga ah ee styrofoam ee bacda balaastigga ah ee aan macquul aheyn in la furo.
Waxa Apple sameyneyso waa qaabeynta iyo fulinta khibrad gaar ah oo isdaba joog ah oo ku saabsan rajada iyo macaamiisheeda. Laga soo bilaabo dukaanka, ilaa baakadaha wax soo saarka, alaabada, nidaamka qalliinka, illaa barnaamijka. Waxaa jira ah jawi hareeraha Apple taas oo ka dhigaysa mid gaar ah. Mana aha wax la yaab leh, waayo-aragnimadu sidoo kale waa mid aad u faa'iido badan.
Suuq geyntu waxay ku lug leedahay muujinta sheyga, midabada, urta, codadka, dhagaystayaasha, dallacaadaha, iyo khibradda wax iibsiga. Sida Mr. Kotler u qoro:
Mid ka mid ah horumarkii ugu dambeeyay ee fekerka ganacsiga ayaa ah aqoonsiga ay dadku, go'aan qaadashadooda iibsashada, uga jawaabaan wax ka badan si fudud wax soo saarka la taaban karo ama adeegga la bixiyo. Badeecada la taaban karo - labo kabood, qaboojiye, timo jarid, ama cunto - waa qeyb yar oo ka mid ah wadarta xirmada isticmaalka. Iibsadayaashu waxay ka jawaabaan wadarta sheyga. Waxaa ka mid ah adeegyada, dammaanadaha, baakadaha, xayeysiinta, maalgelinta, waxyaabaha lagu farxo, sawirrada, iyo astaamaha kale ee la socda sheyga.
Konton sano ka hor iyo xigashada wali wey taagan tahay. Tusaalahaygii ugu horreeyay, waayo-aragnimada iibsiga waxaa waxyeelleeyay ganacsadaha - jawiga ayaa wasakhaysan. Tusaalaha Apple, si joogto ah ayuu u sarreeyaa. Xitaa haddii aad iPad ku iibsato Best Buy, waxaa si taxaddar leh loogu qaabeeyey inay ka soocnaato tartamayaasha.
Sumaddaada internetka, waayo-aragnimada iibka, koritaanka, barxadda, maareynta koontada iyo biilasha ayaa dhammaantood ka mid ah jawi Saameyn ku yeelata awooda shirkadaada si ay u hesho, u heysato una sameysato xiriiro qiimo badan rajadaada iyo macaamiishaada. Xaqiiqdii, waqti ka dib waxaan aaminsanahay inay leeyihiin saameynta ugu weyn ee muddada-dheer ee ku saabsan awooddaada tartanka. Maaddaama shirkaduhu ay internetka u socdaan, waxay noqoneysaa mid lagama maarmaan u ah khibrada iyo joogtaynta internetka inay taageeraan go'aanka iibsiga.
Anigu waxaan ahay qof si cadaalad ah wax ku ool ah marka ay timaado qalabka, wax soo saarka iyo adeegyada aan ku ganacsanno. Daacad baan noqon doonaa, in kastoo, inaan si dhakhso leh ugu qanco go'aanka wax iibsiga markii aan soo jiito calaamadda. Mararka qaarkood waa fiidiyowyada ay soo dhigaan, marna qorista, marna khibrada goobta, iyo mararka qaarkood sumadaha. Hadday dhammaantood is waafaqsan yihiin - goob, bulsheed, emayl, fiidiyoow, iwm. - xitaa waxaad iga heli kartaa anigoo galaya kaarkayga kaararka deynta ee iibsashada khadka tooska ah isla markaasna halkaas. Xitaa haddii ay ku kacayso lacag badan.
Xaqiiqdu waxay tahay, qof kastaa wuu u tartami karaa qiimo jaban. Laakiin markaad isku dayeyso inaad kordhiso faa'iidada oo aad dardar galiso wareeggaaga iibka, waxay ku tiirsan tahay waxtarkaaga suuq geynta hawada.
Tags: tufaaxasuuq geynta hawadajawigaiibsashada ugu fiicandeegaanka iibsadahacadillacfordjoornaalka tafaariiqdaPhilip kotlertafaariiqda